उद्योगमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ «
उद्योगमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ
प्रकाशित मिति : असार १, २०७५ शुक्रबार
नेपाल ष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । एकातिर सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तथा मुद्स्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित ख्नुपर्ने अन्तरविरोधका बीच ष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने धेरैको चासो छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मात्र नभई सरकारी नीतिलाई वित्तीय उपकरणमार्फत लागू गर्ने अभिभार बोकेको केन्द्रीय बैंकप्रति वित्तीय क्षेत्रमात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रको पनि ठूलो अपेक्षा रहेको पाइन्छ । ष्ट्र बैंकलाई सेयर लगानीकर्तादेखि घरजग्गा व्यवसायी मात्र नभई पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गरिरहेका निर्यात व्यवसायीसम्मको मागको चाप छ । सेयर लगानीकर्ताहरू त मार्जिन कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुराउनुपर्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्नेसम्मका माग लिएर केन्द्रीय बैंक पुगिसकेका छन् । यस्तै, संघीयता लागू भइसके पनि सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार नभइसकेकाले सरकारको पनि केन्द्रीय बैंकमाथि उस्तै दबाब छ । मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएकाले पनि तीव्र गतिको आर्थिक विस्तार हुँदा मूल्यवृद्धिको चाप बढ्न सक्ने अवस्थाप्रति केन्द्रीय बैंक गम्भीर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसै पनि पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले समग्र खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको मूल्यमा चाप परिसकेको अवस्था छ । यसरी आगामी आवको मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको केन्द्रीय बैंकसँग केही प्रतिनिधिमूलक निजी क्षेत्रका अपेक्षा र सुझावका सम्बन्धमा सरस्वती ढकालले गरेको कुकानीको सार :
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साकार गर्न सक्नुपर्छ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट आएको छ । निर्धारित समयमा बजेट आउँदा हामी निजी क्षेत्र सकात्मक र उत्साहित छौँ । बजेटमा गरेका व्यवस्थालाई आधार मानेर नै मौद्रिक नीति आउने गर्छ । निजी क्षेत्रको समग्र विकास र लगानीका लागि उत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
आगामी वर्षको बजेटमा ५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य खिएको छ । बजेटले मुद्स्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सिमित ख्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई बृहत् आर्थिक आधार तयार गर्ने भनिएको छ । समृद्धिको यात् आरम्भ गर्नका लागि बजेटसँगै मौद्रिक नीति पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक र वास्तविक हुनु आवश्यक पर्छ । सरकारले खेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई साकार गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अहिले बैंकहरूमा तरलता ‘टाइट’ भएको छ । ‘डिपोजिट’को तुलनामा लेन्डिङको माग उच्च हुँदा बजारमा तरलताको अवस्थाका केही ‘टाइट’ भएको हो । यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्यो । सरकारले खेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पू गर्न निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन उत्साहित गर्ने, उद्योगधन्दा बढ्ने र रोजगारीका अवसर बढाउन सक्ने खालको माद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
ब्याजदरमा ध्यान दिइनुपर्छ
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, तर हामी सबै आयात गरेर खान बाध्य छौँ । आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली मुद् कमजोर हुनु, इन्धनको अन्तर्ष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्नुका कारणले ६.५ मुद्स्फीति कायम ख्नु चुनौतीपूर्ण छ । उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि कुनै ठूला कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गर्न प्रोत्साहन गर्न अब मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्छ ।
ब्याजदर यसरी बढेको छ कि परियोजना सुरु गर्दा ६ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १५/१६ प्रतिशत पुगेको छ । मौद्रिक नीतिले रि–फाइनान्सिङलाई प्थमिकता खेर ब्याजदरका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई विश्वास कायम गउन सक्नुपर्छ । परियोजना सुुरु गर्दा एउटा ब्याज हुने र सक्न नपाउने दोब्बर भएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? खासगरी हाइड्रो क्षेत्रमा ब्याजदरको प्रभाव परेको छ । सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि ब्याजदरको विषयमा कदम चलाउनु आवश्यक छ । नेपालमा विदेशी लगानीबिना ठूला परियोजना गर्न कठिन छ, तर विदेशी लगानी ल्याउन प्रत्याभूति के त ? विदेशी लगानीमा कर छुटलगायतका सुविधामा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । बजेटले विदेशी लगानी ल्याउने देशमा उद्योगधन्दा खोल्ने र रोजगारी बढाउने भनेको छ ।
अब मौद्रिक नीतिले के–कस्तो व्यवस्था गर्छ त्यसले लगानी आउने या नआउने, रोजगारी बढ्ने वा नबढ्ने लागायतको स्पष्ट पार्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उद्यम गर्न उत्साह थप्ने गरी मौद्रिक नीति आयो भने अवश्य पनि ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने बजेट केवल बजेट भाषणमा मात्रै सीमित रहनेछ ।
पुनर्कर्जा कोषमा रकम बढाउनुपर्छ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसघ
वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातको आकार निकै साँघुरो र वृद्धिदर न्युन रहेकाले व्यापारघाटा फकिलो हुँदै गएको छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ । देशको आर्थिक अवस्था सबल हुने भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट नै हो । देशमा जब लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छन्, उद्योगधन्दा खुल्छन्, तब मात्रै रोजगारीको बढ्ने हो । रोजगारी बढाउने लक्ष्य खेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि आधार तय गरिनुपर्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खेका व्यवस्था, प्वधान र लक्ष्य पू गर्न अब मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्नेमा भर पर्छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने भनेको छ । अब त्यस्ता उत्पादनमा साँच्चिकै आत्मनिर्भर बन्न खोजिएको हो भने मौद्रिक नीतिले पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म देशको विकास हुँदैन । लगानी बढाउन लगानीयोग्य रकम छैन, यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
अहिले ब्याजदरको चाप उच्च छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने, देशमा रोजगारी बढाउन टेवा पुग्ने नीतिको पक्षमा हामी छौँ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ तर त्यसलाई उच्चतम प्रयोग र दिगो लाभको दृष्टिले सोच्नु जरुरी छ । हामीले सरकारसँग पटक–पटक पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउन माग गर्दै आएका छौँ । कम्तीमा पनि यो कोषलाई १ खर्ब रुपैयाँबबरको बनाउन सकियो भने उद्योगीहरूलाई केही हत हुने थियो । अर्थ मन्त्लय र ष्ट्र बैंकले यो विषयमा गम्भीर हुने जरुरी छ । औद्योगिक विकास गर्न कोषमा रकम बढाउनुपर्छ । सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुपर्छ । कुल पुँजीगत बजेट चालू आर्थिक बर्षको बजेटभन्दा बढ्न सकेको छैन । लगानी नबढाए उच्च आर्थिक वृद्धिदरकोे लक्ष्य हासिल हुँदैन ।
सरकारले जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेसम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतको निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । फलामको खानी वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन कार्य अधि बढाउने भएको छ । अब मौद्रिक नीति पनि बजेटले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने कुमा ध्यान दिनुपर्छ ।
ब्याजदरको उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल ष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले आयात उच्च र निशाजनक निर्यातले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा सवा ९ खर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको १० महिनाको तुलनामा करिब २२ प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापार घाटा ९ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कसरी बढाउने भन्ने मुख्य विषय टड्कारोे छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादनहरू बढाउनुको विकल्प छैन । जब नेपाली वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् तब मात्रै आयात कम गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । लगानी बढाउनुपर्छ भन्दै गर्दा अहिले ब्याजदर नै लगानीकर्ताका लागि ठूलो चुनौती छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । उद्योगका लागि पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउनुको विकल्प छैन । कोषबाट उपलव्ध गइने रकम र समय दुबै बढाउनु जरुरी छ ।
सरकारले उद्योगलाई संरक्षण दिने भनेको छ । ब्याजदरमा पनि उत्तिकै संरक्षण दिनु जरुरी छ । अहिले ब्याजदरको अवस्था साँच्चिकै डरलाग्दो भएको छ । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्प्रदाय (मुद् आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा सबै पक्षको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । ब्याजदरका सम्वन्धमा मौन्द्रिक नीति केहि बोल्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
आगामी वर्षको बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि थुप्रै सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ । यसबाहेक वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्लयहरूले घाटा कम गर्ने उपाय भन्दै वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । तर, ती कार्यक्रमको सम्भाव्यता, प्रभावकारिता र अनुगमन भने सधैं फितलो हुने गरेको छ । व्यापार घाटा कम र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना पनि गरेको छ ।
जलविद्युत्मा १५ प्रतिशत लगानी बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपाल
नेपाल ष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति २०७५/०७६ जलविद्युत्को अहिलेको लगानी गर्ने प्रतिशत बढाउनुपर्छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूले ५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर बैंकहरूले १५ प्रतिशत पुराउने गरी बाध्यतात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य खेको छ । यो पू गर्नका लागि अहिलेको विद्यमान ऋण लगानी प्रतिशतको आधारमा असम्भव छ । जलविद्युत्का लागि लगानी जुटाउन पुँजी निर्माणलाई महŒव दिनुपर्छ । यसका लागि विदेशी लगानी भिœयाउनेदेखि स्वदेशी लगानी बढाउनेसम्मका प्रक्रियालाई सरलीकृत र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । अहिलेको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले ष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गइसकेका छांै । १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पू गर्नका लागि कम्तीमा २० हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । हालसम्म करिब ५ हजार मेगावाट बबरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भैसकेकोमा यसमध्ये १ हजार मेगावाटको उत्पादन भइसकेको छ । हाल ५ हजार ५ सय मेगावाट बबरका आयोजना पीपीएको प्रतिक्षामा रहेको तथा १५ हजार मेगावाट बनाउन बाँकी आयोजनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले बैंकहरूले बढी ऋण लगानीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिमा सिन्डिकेटेड ऋण सम्झौता भइसकेर ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा कबुल गरेको ऋण रकमलाई लगानी प्रतिशतलाई गणना नगरी पहिलो भुक्तानीबाट मात्र गणना गर्नुपर्छ, जसका कारणले अहिले जुन ५ प्रतिशतको सिलिङ पुग्यो भनेर पीपीए भएका आयोजनाहरूलाई ऋण दिन ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो अन्त्य हुन्छ । आयोजना निर्माण भई विद्युत् प्धिकरणको बिलिङ चालू गरेको तीन महिनाभन्दा अगावै ऋण सम्झौतामा तोको ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाउने गरी व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ ।
लकडाउनको पक्षमा छैन सरकार
बाँकेमा ६ महिनामा ८८ जना लागूऔषध कारोबारी पक्राउ
लोकतन्त्रको महत्व र नेपालको अवस्था
पृथ्वीनारायण शाहलाई समग्रमा स्विकारौं
उत्पादनभन्दा आयातबाट पाँच गुणा बढी कर संकलन
एकीकृत व्यापार रणनीति कार्यान्वयनमा जोड
सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात वृद्धि गरी मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित २०१६ मा पाँच वर्षका
पुँजीगत खर्च बढाए तरलता समस्या समाधान
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । बैंकहरूसँग
कोभिड रोकथामका लागि नागरिक सचेतनामा जोड
केही समय मत्थर हुँदै गएको कोरोनाको तेस्रो लहर अहिले देशभर फैलिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा
नयाँ पुल सञ्चालनमा ल्याउनु नै उत्तम विकल्प
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले खपत गर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्ने मुख्य नाका जोगबनी नाका हो ।
डिजिटल माध्यमबाट पैसाको कारोबार गर्दा पारदर्शी हुन्छ
केही समयअगाडि सनराइज बैंकले एक प्रकारको भिजा कार्ड प्रयोगमा ल्यायो । वाणिज्य बैंकका सदस्यहरूले प्रयोग
संक्रमणका बेला आमनागरिक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ
केही दिनयता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौं उपत्यकामा भीडभाड हुने